Na-enyere ụmụaka na-eto eto aka n'akụkọ akụkọ nke a
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Na-enyere ụmụaka na-eto eto aka n'akụkọ akụkọ nke a
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya "Costa". Anyị Helder Costa Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a na -agụnye nzụlite ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama aha, ebili na akụkọ ama ama, mmekọrịta, na ndụ onwe onye. Na mgbakwunye, eziokwu ndị ọzọ na-apụ apụ amachaghị banyere ya.
Adama Traore Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọsọ ọ na-eweta na egwuregwu ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Helda Costa's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Helder Costa Akụkọ nwata na mmalite ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Hélder Wander Sousa de Azevedo na Costa. A mụrụ Hélder Costa Capricorn na 12th ụbọchị nke January 1994, na Luanda, isi obodo na ọdụ ụgbọ mmiri nke Angola, Southern Africa.
Dị ka ndị Angola ole na ole, Helder Costa mụrụ n'ime ezinụlọ bara ọgaranya, tinye ngaji ọlaọcha n'ọnụ ya. Mgbe ọ bụ nwata, ya na nne na nna ya bi na Ilha do Cabo mara mma, nnukwu ájá gbasapụrụ n'ụsọ oké osimiri Luanda nke jupụtara n'ụlọ mmanya, ụlọ nri, na ọmarịcha osimiri.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Banyere obodo ya: Dị ka Akuko Economic World akụkọ, isi obodo Angola bụ Luanda bụ obodo kachasị ọnụ na ụwa, karịa ndị ọzọ na-enyo enyo dịka Hong Kong, Zurich, na Singapore. N'ikwu nke a, Luanda bụ onye isi obodo ụwa na-asụ asụsụ Portuguese.
Banyere ndị mụrụ ya: N'ikwu okwu banyere nne na nna Helder Costa, ọ bụ ntakịrị ihe ịmara banyere nna ya nke na -egositụbeghị na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ya.
Lee Kang-in Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Agbanyeghị, Ọ dị mkpa ka ị mara na Helder Costa bụ nwa mama. O kwenyere na ya nwere nne kacha mara mma n'ụwa.
Costa abụghị naanị nne na nna ya n'akụkụ ya mgbe ọ bụ nwatakịrị. Ya na nwanne ya nwoke toro Feliz Natal.
Helder nwere nnukwu uru nke nne nne ya ịnọ mgbe niile na ndụ ya na ọrụ ya. Foto ndị dị n'okpuru na-egosi ma ha nwere ezigbo mmekọrịta.
Jack Harrison Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Costa nwere ike itinye ụbọchị ya niile na nnukwu nne nne ya.
Ná mmalite nke ndụ ya, ezinụlọ Helder Costa aghaghị ịhapụ Luanda, Angola gaa Portugal iji nweta ohere akụ na ụba ka mma na football.
N'ebe ahụ, ọ sonyeere nwa nwanne nna ya, Nélson Semedo onye na -egwu FC FC Barcelona ugbu a dị ka n'oge ederede.
Brothersmụnne nke ụdị mmalite ala a:
Ị maara?… Ihe na -amasị William Carvalho, Mma, pepe, Gelson Martins a mụrụ ha niile n'otu mpaghara Portugal n'oge gara aga. N'ihi ya, bọọlụ Portuguese agaghị adị ka ọ dị ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka enyemaka nke obodo ndị nweburu.
Ọganihu ịgba bọọlụ nke mba a bụ nke ukwuu n'ihi ihe ndị obodo ochie nyere. Ọbụna Cristiano Ronaldo nwere mgbọrọgwụ si n'otu n'ime ókèala ndị dị otú ahụ, ya bụ; Cape Verde.
Ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị, ị ga-enwe ike ịkọwa ya
Helda Costa Ndụ mbu ya na bọọlụ:
Helda Costa hụrụ football n'anya site na nwata. Mmasị ya maka bọọlụ hụrụ ya mgbe ọ dị afọ 10 na -edebanye aha n'akwụkwọ ndekọ ndị otu ntorobịa Benfica, nke nyere ya ogbo iji gosipụta talent ya.
Costa nọrọ afọ 8 na Benfica tupu ọ gbaa akaebe ngụsị akwụkwọ ya na football ukwu na afọ 2012. Mgbe Costa na-etolite nke ọma na Benfica, mana o doro anya na ọ chọrọ bọọlụ otu egwuregwu oge niile ọ bụghị na Portugal mana ebe ndị ọzọ na asọmpi siri ike karị.
Leander Dendoncker Akụkọ nwata, gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ ndụ ha
Na Jenụwarị 2015, ebinyere ya na Deportivo La Coruña nke La Liga ebe ọ gbalịsiri ike isi na klọb Spanish. Na July nke otu afọ ahụ, e zigara ya na Monaco Leonardo Jardim.
Nke a bụ oge Monaco na -ejupụta na talent ndị na -eto eto dị ka Mbappe, Bernardo Silva, Fabinho, Martial, na Thomas Lemar, wdg Ọ dị nwute, oke njupụta nke nka na -eto eto mere ka o siere Costa ike ịgbawa Monaco malite XI.
Marcelo Bielsa Akụkọ Nwatakịrị Ntinye Uzo akụkọ Nkọwapụta Untold
Nke a mere ka onye egwuregwu bọọlụ na-awagharị awagharị nke Angola weere England dị ka ebe ikpeazụ ya.
Helder Costa Bio - Ndụ mbido na England:
Ike Costa pụtara ìhè oge Wolverhampton Wanderers bịanyere aka na ya na mbinye ego na July 2016.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị egwuregwu bọọlụ England amabeghị onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ nke mbụ n'ihi ya na -etinye ahịa ya na ọkwa ọkwa Bekee nke abụọ na -ewu ewu.
Diogo Jota Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Kama igwu egwu na Premier League, Costa kpebiri ịnọnyere otu asọmpi ebe a ga -ekwe ya nkwa ịgba bọọlụ oge niile.
Ebe ọ bụ na mgbe ọ sonyeere klọb ahụ, Hélder Costa toro site n'ike ruo n'ike. Agbanyeghị, ọnwa ole na ole mbụ ya na klọb siri ike n'ihi anụ ahụ nke egwuregwu Bekee.
Nnukwu ndị egwuregwu bekee gbara ya gburugburu ka ọ na -agbapụ bọl ya ngwa ngwa.
Helder Costa Biography - Bilie na Akụkọ Ama:
Costa malitere imeri ihe isi ike ndị a mgbe ọ malitere ilekwasị anya n'ike ya. Oge akọwapụtara maka Costa bịara mgbe ọ nyochara oke ọsọ ya na agụụ na -agụkarị ndị na -egwu Liverpool nke dugara na mmeri iko FA.
Costa ji ọsọ gbaa Liverpool n'azụ anọ n'atụghị egwu, na -akpatara ha ọtụtụ nsogbu.
O jiri uru Liverpool dara mee ka ọ bụrụ onye ama ama na bọọlụ bekee. Oge ije ije na njikwa ka ị na-ejegharị n'ụdị ọsọ a bụ ihe akaebe nye ikike egwuregwu na ikike ọrụ ya.
Costa gara n'ihu na -eji ọsọ ya emekpa ndị mmegide ndị ọzọ buru ibu isi wee na -eduga ya ka ọ merie onye ọkpụkpọ klọb nke oge ya n'afọ mbụ ya na Wolves.
Nke a ghọrọ ụzọ dị mma maka ya ịbanye na ndụ na England ebe ọ gara n'ihu na -emeso ndị na -agbachitere ya.
N'oge na-adịghị anya n'ime oge egwuregwu Premier nke mbụ ya, Costa nwere ekele dị ukwuu nwetara ọkpụkpọ ọkpụkpọ mba Portuguese a na-atụ anya ya.
O kwuru nke a na vidiyo mgbe oge obi ụtọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Onye bụ nwunye Helder Costa ka ọ bụrụ?
N'agbanyeghi na ndi n'egwurugwu Portuguese ọ bụla nwere ọganihu, enwere ugbua ma obu enyi nwanyi. Helda Costa maara maka igosi enyi nwanyị nwanyị aha ya ka na-amaghị.
Ma Costa na enyi nwanyị ya na -enwe mmekọrịta siri ike nke etinyere naanị na ọbụbụenyi. N'eziokwu, iọ dịghị mfe imeri nlebara anya Costa ma ọ bụ obi ya.
Agbanyeghị, ozugbo mgbidi ya gbawara ma obi ya gbazee, ọ na -akwụsi ike na mmekọrịta ya.
A na-aghọta Costa na enyi ya nwanyị ka ha bụrụ nne na nna nye nwa ha nwanyị mara mma nke e sere n'okpuru ya na nna ya.
Helder Costa Ndụ nkeonwe:
Ịghọta akụkọ ọrụ Helder Costa ezughị. Mana ịmara ụdị ndụ ọ na -apụ na pitch ga -enyere gị aka iwulite ya nkọwa zuru oke.
Costa n'enweghị obi abụọ ọ bụla bụ onye egwuregwu mara mma nke nwere ọnọdụ nnwere onwe dị n'ime.
A Golfer: Maka ndị Fans, ọ bụghị ihe ijuanya na n'agbanyeghị na ị na-arụ ọrụ na bọlbụ, Helder Costa tinyekwara àgwà egwuregwu ya iji gwuo golf. N'okpuru ebe a ka kpakpando Portuguese na-egwu egwuregwu nke abụọ kachasị amasị ya.
N'elu ebe a, Helder Costa bụ onye gosipụtara ntozu okè na àgwà na omume. A na-ahụ nke a na ọdịdị enyi ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Helder Costa Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na -agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Francisco Trincao Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Aurelien Tchouameni Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Sandro Tonali Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Nikola Vlasic Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mikel Oyarzabal Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akwụkwọ Leeds Football
Akwụkwọ akụkọ egwuregwu bọọlụ Valencia
Hwang Hee-chan Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ben White Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Conor Coady Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Kalvin Phillips Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Fabio Silva Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Pedro Neto Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ